''देश भर लकडाउन गर्ने भनेको होइन'' : प्रवक्त डा. जागेश्वर गौतम–Samacharpati
काठमाडौं ८ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्त डा. जागेश्वर गौतमले देश भर लकडाउन गर्ने भनेको होइन भनेका छन् । प्रवक्ता डा. गौतमले आज एक कार्यक्रममा बोल्दै आफुले लकडाउन गर्ने भनिएको होइन भनेका हुन् ।
कार्यक्रममा गौतमले हिजो बसेको बैंठकमा दुई ओटा कुरा भनेको स्पष्ट पारेका छन् । पहिलो अहिले जे–जे कुरामा प्रतिबन्ध छ, जस्तो सपिङ मलहरू, स्विमिङ पुलहरू, कलेजहरू, पार्टी प्यालेसहरू जहाँ भीडभाड हुन्छ, त्यहाँ त्यो कुरा एक महिना निरन्तर गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गरिएको हो ।
दोस्रो कुरा २५००० संक्रमित भए भने हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाले धान्न कठिन पर्छ । दुई दिन अगाडि १८००० पुगेको कोरोना संक्रमितको संख्या हिजो १७ सय पुगेको थियो ।
यसरी संक्रमित बढ्दै गए हाम्रो स्वास्थ्य पुर्वाधारले धान्न नसक्ने भएकाले जुन ठाँउमा धेरै संक्रमित हुन्छन् त्यस्ता ठाँउमा मात्र लकडाउन गर्ने भनिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रवक्ता गौतमले सम्पुर्ण दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पालना गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
उनले यो पनि भनेका छन् कि, यदि सबैले मास्क लगाइदिए, सामाजिक दुरी कायम राखे, होम क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै बिरामीले आफुले प्रयोग गरेको सामान उचित ठाउँमा डिस्पोज गर्यो भने यो संकटबाट सबैले छ्टकरा पाउने बताएका छन् ।
टर्की र मेसोडोनियाको भ्रमण गरी नेता माधवकुमार स्वदेश फिर्ता
बर्दियामा हावाहुरीका कारण तीन जना घाइते, चार दर्जन घरमा क्षति
एक सय चार वर्षिया बृद्धाले जितिन कोरोना